Iyo Apple Watch ndiyo yakatengesa zvakanyanya smartwatch muna 2018 | Ndinobva mac
Pasina kupokana, iyo Apple Watch inomiririra chikamu chakakosha cheizvo zvakatengeswa neCupertino. Uye ndeyekuti, inoyevedza inoyevedza yeiyo iPhone, sezvo ichizvisimbisa pachayo chaizvo kuti ipe ruzivo rwakakodzera zvakanyanya kubva pachiuno.
Zvino, chokwadi ndechekuti kune avo vanokakahadzika kubudirira kweiyi smartwatch, uye kwavari gwaro idzva, rinonakidza kwazvo rakagadzirwa, iro inoratidza kushanduka kwekutengesa kweakanyanya smartwatches pamusika mukati me2018, uye iyo korona iyo Apple Watch semunhu anokunda.
Iyo Apple Watch ndiyo yakanyanya kutengesa smartwatch ye2018
Sezvatakadzidza, nguva pfupi yadarika timu ye IDC yakapa mushumo mutsva pamusoro pekutengeswa kwemawadhi akangwara kutenderera pasirese. Chekutanga pane zvese, sechokwadi chinonakidza, tinogona kuzviona Mumwedzi mina yekupedzisira ye4, smart wachi yekutengesa yakakura ne2018%, chikamu chinonyanya kufarira chinotiratidza kuti vanhu vazhinji vanofarira rudzi urwu rwechigadzirwa.
Uye, hongu, izvi zvakare zvinokanganisa zvakanyanya kutengesa kweApple Watch, nekuti sezviri pachena Mugore rese rapfuura 2018, kutengesa kwaizodai kwakakwira ne27,5% chete pairi wachi, iyo inogona kushandurwa kuita chimwe chinhu uye hapana zvishoma pasi pe Mamiriyoni 172,2 emidziyo yakatengeswa neApple, uko kunyanya iyo Series 4 uye Series 3 inomira.
Nenzira iyi, tinogona kuona kuti Apple Watch ingadai yakaunza mari yakakosha sei kuApple, nekuti chokwadi ndechekuti kutengesa kwayo kunoshamisa, uye iri pamberi pamberi pemakwikwi maererano nekutengesa, kunyangwe chiri chokwadi kuti mamwe mafemu akaita saXiaomi kana Huawei ari kuwanawo chikamu chakakosha chemugove wemusika.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Chidzidzo cheIDC chinoshongedza korona yeApple seye yakatengesa zvakanyanya smartwatch yeyakare 2018
Tora 20% dhisikaundi nekutenga kweye Sonos mutauri